सेयरबजारमा आजको कारोबार कस्तो ?
सेयरबजारमा आज ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन आठ अर्ब नाघेको कारोबार रकम आज घटेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बजार परिसूचक नेप्से भने ५४.१२ अंकले र सेन्सिटिभ सूचक ८.९४ अंकले बढेको छ।
आजको कारोबारमा २२४ कम्पनी सामेल भएका छन्। दिनभरिमा ७७ हजार ६ सय ६८ पटकको कारोबारमा एक करोड १८ लाख ३४ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएका छन्। साताको अन्तिम दिनको कारोबारमा अन्य समूहको सूचकबाहेक बाँकी सबै हरियो रहे।
आज ४ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेका छन्। लगानीकर्ताले आज २.०३ प्रतिशतसम्म मात्रै गुमाएका छन्। सर्वाधिक कारोबार भने आज माथिल्लो तामाकोशीको भएको छ। कम्पनीको ३४ करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। आज जलविद्युत् कम्पनीहरुको उच्च कारोबार भएको छ।
कालिन्चोक केबलकारले १२ करोड रुपैयाँको आइपीओ ल्याउँदै
आजको शेयर कारोबार कस्तो ?
साताको पहिलो दिन आज नेप्सेको कारोबार कस्तो ?
आजको शेयर कारोबार ?
शेयर बजारमा उत्साह, आज पछिल्लो तीन महिनाकै उच्च कारोबार